Gaa na ntụrụndụ gị na Rummy - pisklak.net
Gaa na ntụrụndụ gị na Rummy
Rummy bụ ntụrụndụ mmadụ. Isiokwu dịn’okpuru na-ekwu maka etu esi esi mụta Internet Rummy yana otu esi enwe ike ịme yan’otu ụzọ. Ọzọkwa ọ na -ekwu okwu dị ka ole na ole a maara nke ọma Rummy egwu egwuregwu weebụsaịtị na-enye nnọọ mma uzo ozo ka un ọrụ. Ọ na – ewepụ obi abụọ niile nke ndị na – agụ un ihe dịka Rummy na iwu un t India.
Ever nwetụla mgbe ị na-rummy tupu? ) Ọ bụrụ ee, ọ pụtara na ị ga-achọpụtarịrị na ụdị egwuregwu a bụ ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa oke mma. Ọ bụrụ na ịmebeghị rummy n’ụzọ ọ bụla, ị ga-achọ ịmata etu egwuregwu si arụ ọrụ. N’oge na-adịghị anya ị ghọrọ ọkachamara na rummy. Ọ dị ihe niile ịnweta usoro gị na ikike gị. Ihe ntụrụndụ that a nke kaadị iri na atọ nwere ike ịdị ọcha nke ọma ma chọọ ka ọ bụrụ egwuregwu aghụghọ iji merie.
All of kaadị egwuregwu na-atọ ọchị na-egwu ọnụ yana gị friends Id ezinụlọ. Mana Rummy bu ihe egwuru-egwu nke ejiri obi mmadu nile huru n’anya. Ntụrụndụ that a ga-enwe na akara na weebụsaịtị dị iche iche dị ka Rummybaazi. Ihe mgbaru ọsọ kachasị mkpa nke ntụrụndụ a bụ ịtọ kaadị egwun’ime usoro d e nkeji. Ikwesiri ịdị nkenke ma nwee nghọta n’ime mkpakọrịta nke kaadị kaadị gị.
Rummy bụ ama ama ke India, ọ Ọzọkwa nwere bụla ọzọ version kwuru dị ka Indian rummy aghụghọ. Enwere ike ịnwe mgbanwe dị nwayọ ole na ole na ụkpụrụ nke egwuregwu vidio ọ bụla. A na-akpọ rummy Indian dị ka Peplum.
Ugwu that a nke ntụrụndụ gbatịrị ma ọ ghọrọn’igwe egwuregwu dịn’ịntanetị. Na egwuregwu ịntanetị, ụmụ mmadụ nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta ma soro ndị na-anụ ọkụ n’obi na-egwuri egwu gburugburu ụwa ugbu a abụghị naanị India.
Realize ghọtara na ị nwere ike irite self love ebe ị na-egwu rummy? Ee, ị nụrụ nke ahụ ziri ezi! Rummy abụghị naanị maka ntụrụndụ ka ọ dị, ị nwere ike nweta self service ọzọ website Id iji merie egwuregwu ahụ na akara. Rummybaazi na Rummy Jacks bụ ọtụtụ ọnụọgụ ebe nrụọrụ weebụ na ngwa maka egwu Rummy Online. A kwadokwara ngwa ndị that a maka iwepu self yana nchekwa maka t nkenke.
Nweghi ike nyocha Rummy kachasị arụ ọrụ na weebụsaịtị ndị ahụ ma chọpụta ihe ndị ọzọ ga-eji duhie onye iro gị ebe ị na-egwu egwuregwu ahụ. Ndụmọdụ na ntughari bụ echiche inyocha na weebụsaịtị ha. Ọzọkwa, ha na-enye ụzọ ndị ọzọ dị iche iche dịka mkpụrụ self explanatory, Mwepu onwe onye, ​​iji nyere onye sn’ụbọchị ma ọ bụ ndị na-azụ ya aka imeri ihe ndị riri ha ahụ na iji chetara ha self ha mefurun’ụbọchị ahụ. Uzo a enweghi nsogbu nke imefu ego n’ime uzo ezighi ezi.
Maka unu niile na-eju anya ma ọ bụrụ na ọ dị oke egwu igwu ndị ahụ na egwuregwu egwuregwu. Ọ bụ 100 percent iwu t Indian’ihi na Supremelọikpe Kasị Elu kwupụtara na ọ bụ iwu na 2015. Ọ bịara kwupụta na ọ bụ ntụrụndụ nke ikike yana a na-aghọtahiekarị ya ka ọ bụrụ ụdị ịgba chaa chaa. Ya only gaan’ihun’enweghị onye ọ bụla na-echegbu onwe gị ma nweta obere selfn’akpa uwe ebe ị na-ekere òkè na ntụrụndụ kachasị amasị gị na ahịrị. Budata ma kpọọ Rummy ugbu a!